कसरी टेलिग्राम | को उपयोग गरेर तपाइँको किन्डलसँग कुनै पनि ईबुक थप्न र संगत गर्ने ग्याजेट समाचार
कसरी टेलिग्राम प्रयोग गरेर तपाइँको किन्डलको साथ कुनै पनि ईबुक थप्न र संगत गर्न
रुबेन गेलार्डो | | ईरेडरहरू, ट्यूटोरियलहरू
यद्यपि एप्पल र अन्य कम्पनीहरूले सँधै ई-बुक उद्योगबाट केकको टुक्रा प्राप्त गर्न चाहेका थिए, यो कुरा पनि साँचो हो कि यस बजारमा सँधै राजा रहन्छ। अमेजन र यसको किन्डल प्लेटफर्म। इ-वाणिज्य विशाललाई सँधै थाहा छ कसरी डिजिटलाइज्ड शीर्षकहरूको एक ठूलो क्याटलग छ र पनि - र कम्तिमा पनि होइन - यसका ग्राहकहरूलाई उपकरणहरू दिनुहोस् ताकि तिनीहरू सजिलैसँग पुस्तकहरूको आनन्द लिन सक्दछन्।
ठ्याक्कै, हामी किन्डल र यसको बिभिन्न प्रकारहरू सन्दर्भ गर्दछौं। तिनीहरू टोली हुन् कि राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रस्ताव गर्नुहोस् र तपाईका आँखाहरू थकित हुनुहुन्न यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो घण्टा पढिरहेको छ: तिनीहरूले इलेक्ट्रॉनिक मसी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छन्। अब जहिले जहिले पनि यसको प्रयोगमा "तर" हुन्छ। र तपाइँ तिनीहरूको ढाँचामा जहिले पनि ईबुक प्रयोग गर्न निन्दा गरिन्छ।
धेरै अवसरहरूमा टिप्पणी गरिएको छ, र अमेजन धेरै अवसरहरूमा भनिएको छ, कम्पनीले आफ्नो सेवाहरु बेच्ने हार्डवेयर बाट छैन आफ्नो सेवाहरु लाई फाइदा। र यस्तो देखिन्छ कि चीजहरू नराम्रा रूपमा काम गरिरहेका छैनन्। यद्यपि किन्डलको एक मुख्य "जटिलता" हो कि उनीहरूले ढाँचामा समर्थन गर्छन्। मोबी। र यदि तपाईं यस प्रकारको इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरूमा नियमित हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि त्यहाँ बजारमा विभिन्न ढाँचाहरू छन् र अन्य बिक्री प्लेटफर्महरू प्रदर्शन। हाम्रो मतलब .EPUB। के हुन्छ यदि तपाईले एउटा इलेक्ट्रोनिक पुस्तक - ebook - अमेजन भन्दा बाहिर किन्नुभयो र किन्डल राख्नुभयो? जवाफ धेरै आशावादी छैन: कि त तपाईं डाउनलोड शीर्षकको मजा लिई छोड्नुभयो; वा तपाईं वैकल्पिक पाठकको खोजीमा हुनुहुन्छ; वा त्यो प्रारूपलाई एक किन्डल मिल्दोमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। र यो धेरै सजिलो छ यदि हामी प्रसिद्ध इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग सेवा टेलिग्रामबाट एक बोट प्रयोग गर्छौं।
1 Kindle Bot लाई: के तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नु पर्छ
2 तपाईंको टेलिग्राम खातामा किन्डल टु बोट सेट अप गर्नुहोस्
3 टेलिग्राममा "To Kindle Bot" प्रयोग गर्न सुरू गर्दै
Kindle Bot लाई: के तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नु पर्छ
यदि तपाईं अझै सोच्नुहुन्छ कि टेलीग्राम एक साधारण त्वरित सन्देश सेवा हो, तपाईं धेरै गलत हुनुहुन्छ। हो, यो पनि छ। तर यस सेवामा तपाईले सोचे भन्दा धेरै सम्भावनाहरू छन्। तपाइँको रूचिको रूचीमा कुनै पनि च्यानलमा च्यानलहरू थप बाहेक, यो प्रतिलिपि अधिकारयुक्त सामग्रीको लदानमा पनि संवेदनशील छ-, यससँग उपकरणहरू पनि छन् जस्तो आज हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्छौं। Kindle Bot लाई.
यी बोटहरू हुन् तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू जुन टेलिग्राम इकोसिस्टम भित्र काम गर्दछ। र यो विशेष अवस्थामा यसले तपाईंको किन्डल खातासँग काम गर्दछ, जुन तपाईंले पहिलो पटक खोल्नुहुन्छ जब तपाईं अमेजनको डिजिटल पठन प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईंको छनौटको प्लेटफर्ममा टेलीग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई तपाइँको ब्राउजर मार्फत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा डेस्कटप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको कम्प्युटरको साथ प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। त्यो भने, तपाईं हुनेछ थप्नुहोस् तपाईंको खातामा Bot Kindle गर्न र यसलाई प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। तर तपाईलाई यो कन्फिगर गर्न के चाहिन्छ?
तपाईंको टेलिग्राम खातामा किन्डल टु बोट सेट अप गर्नुहोस्
त्यहाँ दुईवटा चीजहरू छन् जुन यस मूल टेलीग्राम बोटले तपाईंलाई यसको प्रयोग गर्न सोध्नेछ। के हो, एक पटक तपाईंले यसलाई तपाईंको खातामा थप्नुभयो भने, तपाईंले निर्देशनहरू अंग्रेजीमा देख्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई के सोध्छ? ठीक पहिलो कुरा तपाईले उत्तर दिनु भयो तपाइँको निजीकृत किन्डल खाता पेश गर्दै। त्यो हो, जुनसँग निम्न संरचनाहरू छन्: username@kindle.com। तपाईको निजीकृत ईमेल ठेगाना के हो पत्ता लगाउन तपाईको अमेजन खातामा लगईन गर्नुहोस् र ड्रप-डाउन मेनू सेक्सनमा जानुहोस् "सामग्री र उपकरणहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्".
बिभिन्न ट्याबहरू देखा पर्नेछन्, अन्तिम मध्ये एक "सेटिंग्स" को संकेत गर्दै। यसमा र सेक्शनमा क्लिक गर्नुहोस् Documents व्यक्तिगत कागजातहरूको कन्फिगरेसन » तपाईं आफ्नो खाता बारे मा जानकारी देख्नुहुनेछ @ kindle.com। एकचोटि तपाईंले यो खातालाई बोटमा पठाउनुभयो (बन्ड जलाउन), यो समय यो ईमेल खाता थप्नको लागि समय हो जुन यो सेवाले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ।
यस खातालाई को सेक्सनमा थप गर्नुपर्नेछ Documents व्यक्तिगत कागजातहरू पठाउनका लागि अधिकृत ई-मेल ठेगानाहरूको सूची »। यो विकल्प अघिल्लो चरण भन्दा थोरै कम छ। तपाईको व्यक्तिगत ईमेल खाता पनि फेला पर्नेछ। त्यो ईमेल खाता प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई Bot Kindle Bot गर्न बताउँछ र यो त्यस्तै हो।
टेलिग्राममा "To Kindle Bot" प्रयोग गर्न सुरू गर्दै
यो प्रयोग गर्न सुरु गर्ने समय आउनेछ। पुस्तकहरू .EPUB मा स Collect्कलन गर्नुहोस्, उदाहरणको लागि, तपाइँ यसलाई तपाइँको किन्डल पाठकबाट पढ्नको लागि सक्षम हुन रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ। फाइल [हरू] लाई बोटमा पठाउनुहोस् र रूपान्तरणले दुई मिनेट भन्दा धेरै घडी लिदैन। त्यसो भए के हुन्छ? सबै पहिलेका चरणहरू जुन हामीले यस बोटलाई कन्फिगर गर्नका लागि गरेका थियौं कि एक पटक .MOBI ढाँचामा रूपान्तरण भएपछि, पुस्तक स्वचालित रूपमा तपाईंको किन्डल खातामा अपलोड भयो।
तपाईंले पुस्तकका लागि केही मिनेट प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ। र यो किन्डल कागजात सेक्सन मा त्यसो गर्छ; भन्नुपर्दा, उही ठाउँमा जहाँ सबै प्रकारका फाईलहरू पठाइन्छ - सामान्यतया पीडीएफ ढाँचामा - लोकप्रिय पुस्तक पाठकबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ। अन्तमा, त्यो किन्डल सम्झनुहोस् यो प्रयोग गर्न सकिन्छ दुबै पुस्तक पाठकमा, एकमा ट्याब्लेट आधिकारिक अनुप्रयोगहरू मार्फत, एकमा स्मार्टफोन वा कम्प्युटरबाट.
* नोट: Actualidad Gadget बाट हामी यस बोटलाई दिइने उपयोगको लागि जिम्मेवार छैनौं। हामी बुझ्दछौं कि रूपान्तरित गर्न सबै सामग्री कानूनी रूपमा अधिग्रहण गरिएको छ
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी टेलिग्राम प्रयोग गरेर तपाइँको किन्डलको साथ कुनै पनि ईबुक थप्न र संगत गर्न
Javier Mercadé भन्यो
बोटले मलाई बताउँछ कि म मात्र एक महिनामा5रूपान्तरण गर्न सक्छु ...
Javier Mercadé लाई जवाफ दिनुहोस्
पछिल्लो च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा अनुहार मान्यतामा २,००० झूटा सकारात्मक
NVIDIA अन्ततः यसको विवादास्पद साझेदार कार्यक्रम रद्द गर्दछ